ओष्ठस्पर्शका प्रकारका बारेमा तपाईंलाई जानकारी छ ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
ओष्ठस्पर्शका प्रकारका बारेमा तपाईंलाई जानकारी छ ?
नबोलिकनै मनका भावनाका बारेमा बताउन चुम्बन प्रभावकारी माध्यम हो । यसमा रचनात्मकता देखाउने प्रशस्त स्थान छ । आउनुस् जानौं चुम्बनका केही प्रकार :
चुम्बनको सबभन्दा कामुक प्रकार हो यो । शुरूमा तपाईं आफ्नो प्रेमीको ओठमा बिस्तारै आफ्नो ओठ टाँस्नुस् । हतार नगर्नुस्, यो स्वर्गीय क्षणको क्रमिक आनन्द लिनुस् । त्यसपछि बिस्तारै जिभ्रो निकाल्नुस् र पार्टनरको जिभ्रोमा छुआउनुस् ।
प्रेमीको ओठलाई आफ्ना ओठले च्याप्ने यो रोमान्टिक तरिका प्रेम दर्शाउनका लागि पर्फेक्ट छ । पहिला बिस्तारै नजिकिनुस् र पार्टनरको ओठ खोज्नुस् । त्यसपछि कोमल तरिकाले रोमान्टिकताका साथ ओठ चुस्नुस् । टोक्ने काम नगर्नुस्, दाँतलाई बिर्सनुस् । आफ्ना ओठका बीचमा प्रेमीको एउटा ओठ च्यापेर चुस्दा बलियो सन्देश पुग्छ ।
माउसुलीले जिभ्रो निकालेको देख्नुभएको छ ? यो किसमा पनि त्यसैगरी प्रेमीप्रेमिकाले जिभ्रो निकल्छन् र ओठको प्रयोग नगरिकनै एकअर्कालाई किस गर्छन् । कसैकसैलाई यो फोहोरी तरिका लाग्ला तर अन्तरंग क्षणहरूमा यसको महत्व बेग्लै छ ।
अमेरिकी किसमा जिभ्रोको प्रयोग हुँदैन । आफ्नी प्रेमिकालाई कम्मरमा समातेर नजिक्याउनुस् र बेस्सरी चुमेर शरीरमा टाँस्नुस् । उनको ढाड आफ्नो हातमा अड्याएर झुकाउनुस् अनि रोमान्टिक क्षणमा हराउनुस् । यसले तपाईं दुवैलाई कामुक आवेग दिलाउँछ ।
दुवैजनाले ओठको बीचमा बरफको टुक्रा राख्नुस् र किस गर्न थाल्नुस् । बरफ मुखमा नपग्लुन्जेल प्यासनका साथ किस गर्नुस् । यो चुम्बनले तपाईंको पार्टनरको रौं ठाडो बनाइदिन्छ ।
यो क्युट र कामुक किस हो । पार्टनरको तल्लो ओठलाई हल्कासँग टोक्नुस् । बेस्सरी टोक्नुभयो भने दुख्छ र रोमान्स नै मर्छ । सेक्सको शुरूवातमा यो किस गर्दा तपाईं आनन्द कैयौं गुणा बढ्छ ।
पार्टनरको ओठमा मायालु पाराले जिभ्रो घुमाउनुस् र घरिघरि चुम्बन गर्नुस् । यसले तपाईंको क्रीडामा मसला थप्छ अनि पार्टनरलाई उत्तेजित बनाउँछ ।
स्रोत :द टाइम्स अफ इन्डिया